बिज्ञान प्रविधी Archives - Page3of 12 - Tamang Online
तपार्इं हामीले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोन कुनैपनि बेला तात्न सक्दछ । प्रयोग गर्दागर्दै स्मार्टफोन तातेको बेला के गर्नुहुन्छ ? फोन चलाउन छाडेर गोजीमा राख्ने, कानबाट हटाउने, गोजीबाट निकाल्ने आदि आदि । कहिलेकाहीँ नचलाउँदा नचलाउँदै पनि फोन तात्ने समस्या आउन सक्दछ । आखिर फोन अनायासै तात्नुको कारण के हो ? वास्तवमा यसका विभिन्न कारण हुनसक्दछन् । एउटा कारण हार्डवेयरको समस्या । हार्डवेयर, जसलाई स्मार्टफोनको मस्तिष्क पनि भनिन्छ । फोनभित्रको हार्डवेयरको समस्याले मात्र
सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफैंले कारबाही गरेका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झालाई मन्त्रिपरिषदबाट गराएको पुनर्नियुक्ति विवादित र रहस्यपूर्ण बनेको छ। चार महिनाअघि झालाई काम गर्न रोक लगाएदेखि बिहीबार बेलुकी मन्त्रिपरिषदबाटै पुनर्नियुक्ति गराउँदासम्मका सिलसिला रहस्यपूर्ण छन्। यसका धेरै पाटा खुल्न बाँकी छ। मन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै बाँस्कोटाले दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका काम-कारबाहीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयकै पूर्व सहसचिव सुशील राउतको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बाँस्कोटाले
युट्युबलाई टक्कर दिनेछ फेसबुकको यो नयाँ टुल
फेसबुक संसारभरी आफ्नो वाच भिडियो स्ट्रिमिङ सर्भिस लञ्च गर्ने तयारीमा छ । अमेरिकामा भने यो सर्भिस एक वर्षदेखि चलिरहेको छ । यो सर्भिसले प्रयोगकर्तालाई विभिन्न विकल्प दिनेछ जसमध्ये उनीहरुले आफूलाई मनपरेको कार्यक्रम छान्न सक्नेछन् । यसमा ठूला ब्रान्डदेखि नयाँ खेलाडी, दुबैको कार्यक्रम हेर्न सकिनेछ । यसबाहेक न्यूज फिडमा सेभ गरिएका क्लिप पनि हेर्न सकिन्छ । दर्शकले जुन भिडियो धेरै हेर्छन्, त्यसले विज्ञापन पाउन थाल्छ । अहिलेसम्म निकै कम पब्लिसरले मात्र
काठमाडौं -सरकारले नेपाल टेलिकमकी महाप्रबन्धक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यो निर्णय गरेको हो। तीन वर्षे कार्यकालका लागि २०७३ असोजमा नियुक्त भएकी कामिनी राजभण्डारीसँग ओली सरकारले दोस्रो पटक केही दिनअघि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। पहिलो पटक स्पष्टीकरण सोधेर सफाइ दिएपछि पनि राजभण्डारीले टेलिकमको हितमा काम गर्न नसकेको ठहरसहित उनलाई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। राजभण्डारीले दिएको जवाफ चित्त नबुझेकाले मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पदबाट
मोबाइल हरायो ? पत्ता लगाउन अब अनलाइनबाटै दर्ता
काठमाडौँ, साउन १७ गते । मोबाइल हराएर त्यसलाई पत्ता लगाउने उपायबारे जानकारी नभएर तनावमा हुनुहुन्छ भने यो खबरले केही राहत मिल्नेछ । हराएका मोबाइल पत्ता लगाउन यसअघि प्रहरी कार्यालयसम्म जानुपर्ने र त्यसका लागि नियमित धाउनुपर्ने एउटा बाध्यता अन्त्य हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको इक्विपमेन्ट आइडेन्टीटी रजिस्ट्रर (उपकरण पहिचान दर्ता) परियोजना अन्तर्गत हराएको मोबाइल खोज्नका लागि अनलाइनमै दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेको हो
एप्पल प्रयोगकर्ताको गोपनीयता निम्ति फेसबुकसँग भिड्दै
अमेरिकी अनुसन्धान संस्था ‘एफबिआई’ ले केही समयअघि एक अभियुक्तको आइफोन ‘अनलक’ गरेर सूचना उपलब्ध गराउन एप्पललाई दबाब दिएको थियो।संसारकै अग्रणी मोबाइल उत्पादक कम्पनी ‘एप्पल’ यो दबाबविरुद्ध कानुनी उपचारमा गयो, तर एफबिआईले मागेको सूचना दिएन। आफ्ना ग्राहकको फोन ‘अनलक’ गरेर सूचना चोर्नु ‘गोपनीयताको हकविरुद्ध’ हुने कम्पनीको जिकिर थियो।उपभोक्ताको गोपनीयता निम्ति एफबिआईसँग लडाइँ मोलेको एप्पलले पछिल्लोपटक फेसबुकलाई त्यस्तै चुनौती दिएको छ। फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ता पछ्याउने क्षमता राख्छ। कसले कुन ठाउँमा बसेर फेसबुक
पुरानो फोन नफाल्नुस् , त्यसमा सुन हुन्छ !
काठमाडौं। स्मार्टफोनको क्रेज लगातार बढिरहेको छ ।अहिले अवस्था यस्तोसम्म भइसकेको छ कि मानिसहरु सामान्य समस्यामै पुरानो फोन छाडेर नयाँ फोन लिन्छन् । नयाँ फोन किनेपछि हामीले पुरानो फोनलाई कतै थन्क्याएर बिर्सिन्छौं । तर के तपाइँलाई थाहा छ ? जुन स्मार्टफोनलाई तपाइँ बेकार सम्झेर थन्क्याउनुहुन्छ त्यसमा सुन हुन्छ । फोन बनाउन सुनको पन प्रयोग हुन्छ । असका अलावा फोन बनाउन चाँदी, तामाजस्ता अन्य धातुहरुको पनि प्रयोग हुन्छ । एक मोवाइल फोनमा